शनिबार विशेष २८ मंसिर- २०७६
साइकल चढेर सगरमाथा चुम्दा... . २८ मंसिर २०७६
एउटा आरन जिन्दगी विदेश जानुभन्दा पनि आफ्नै देशमा पसिना बगाउन सके यहीँ मनग्य आम्दानी हुने उनी ठान्छन् । आधुनिक तरिकाले विभिन्न व्यवसाय गर्न सकिए युवा विदेश पलायन हुनु नपर्ने उनको निष्कर्ष छ . २८ मंसिर २०७६
समर्पण म कहाँ त्यति माथि उठ्न सकेँ र ! प्रतीक्षारत परिवारलाई सम्झी लाममै उभिइरहेँ । गोडा लुगलुग कामिरहेका थिए आफ्नै अङ्ग टुक्रिएझैँ । २८ मंसिर २०७६
अन्धकार कहिले लाग्छ, पूर्णिमाको अस्तित्व मेटिनेगरी यहाँ अमावश्यको रात अविरल बगोस् भनेर यस्तै छ यो मनको हाल अनि जीवन छ पूर्ण बेहाल । २८ मंसिर २०७६
तिमी त रै'छौ नि ! मन प्रफुल्लित छ आज हृदयमा फुलेको फूलको सुवास टिपेर उडिरहेको पुतलीलाई आकाशले हार्दिक स्वागत गरेझैँ । २८ मंसिर २०७६
बूँद रानाकाे गजल कलेँटी परेको छ सुन्दै छु लाली ! नमीठो खबरको कुरा के गरूँ खै ! २८ मंसिर २०७६
हिन्दु धर्मका सोह्र संस्कार : गर्भाधानदेखि अन्त्येष्टिसम्म गर्भाधान संस्कारबारे महर्षि चरकले भनेका छन् कि मनलाई प्रसन्न र पुष्ट राख्नु गर्भधारणका लागि आवश्यक छ । यस कारण महिला र पुरुषले सधैँ उत्तर भोजन गर्नु जरुरी छ भने प्रसन्नचित्त रहनुपर्छ । . २८ मंसिर २०७६
विमानबाट खसेर बाँचेको त्यो क्षण भोलिपल्ट तत्कालीन कृषिमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली भेट्न आउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डा. प्याकुरेलले तपाईंको साह्रै प्रशंसा गर्नुभयो । तपाईं त देशका लागि धेरै गर्नु छ भनेर नमर्नुभएको रहेछ । मेरो तपाईंलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र भविष्यको सफलताको शुभकामना ।’ २८ मंसिर २०७६